Fampiroborobona ny kolontsaina :: Misy fampifangaroana andraikitra eo amin’ireo mpisehatra ara-javakanto • AoRaha
Fampiroborobona ny kolontsaina Misy fampifangaroana andraikitra eo amin’ireo mpisehatra ara-javakanto
Mampiraikitra ny fampivoarana ny tontolon’ny zavakanto eto Madagasikara ny fifangaroan’ny asa sahanin’ny mpisehatra isan-tsokajiny, araka ny fomba fijerin-dRasoanaivo Hanitrarivo na i Hanitra, ao amin’ny tarika Tarika. « Ny eto amintsika, sady mpanakanto no mpamorona no mpikarakara ny mpisehatra sasany. Antony iray tsy mampandroso ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy ny toy izany”, hoy ity mpanorina ny tarika Tarika ity. Nambarany fa tokony hisy fizarana asa raha te hampandroso sy hampivelatra marina ny kanto sy kolontsaina malagasy. Tombotsoa lehibe no ho azo, raha izay no himasoana, araka ny fanazavan’ity artista ity hatrany satria tsara lamina sy mirindra ny zava-drehetra.
“Tsy mety ny mifofotra sady mively vy fa tokony samy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay”, hoy i Hanitra .Noraisiny ho ohatra ny fiarahany miasa amina olona maromaro amin’ny fanantaterahana hetsika na fampisehaona iray. Mahatratra telo amby sivifolo ry zareo no indray mifarimbona. “Miteraka asa sady mampiditra vola vahiny sy ny zavatra toy izany izy ireny”, hoy ny fanazavany.
Anisan’ireo andrin’ny kanto malagasy sady manana traikefa mafonja amin’ny fampandrosoana ny kolontsaina sy zavakanto Rasoanaivo Hanitrarivo. Tao amin’ny tarika Tarika no tena nahafantaran’ny maro azy teo amin’ny asa fanaovana mozika. Saika hivelarany avokoa ny endriky ny kanto misy rehetra. Ny fivoizana ny maha malagasy ao anatin’ny mozika no nametraka azy ho isan’ireo kintan’ny kanto malagasy. Manomboka amin’ny taovolo, firavaka, fitafy hatramin’ny kiraro, no ahitana io fototra voiziny io. Tsikaritra amin’ireo zavamaneno ampiasainy ihany koa ny loko malgasy.
Fizarana traikefa :: Mamoha ny fahaiza-manaony ireo mpitendry «ôrga »